Ahoana ny fametrahana LAMP amin'ny Ubuntu: ny fomba mora | Avy amin'ny Linux
jiro dia ny fampifandraisan'ireo teknolojia 4 (Linux + Apache + MySQL + PHP) hitantanana ny mpizara tranonkala anao amin'ny PC-nao. Raha ny mahazatra dia tsotra ny fametrahana ny LAMP amin'ny Ubuntu saingy hitako fa misy fomba mora kokoa aza hanaovana azy.
1.- Nanokatra aho Synaptic> Edit> Mariho fonosana isaky ny lahasa…> LAMP Server.
Minoa na tsia, dia izay. na manazava tena ilay fanalana.
2.- Tena ampirisihina mafy ianao hametraka ny fonosana phpmyadmin.
3.- Sokafy ny tranokalan'ny tranonkala tianao indrindra ary mizaha mankany amin'ilay pejy http://localhost. Izany no ho lahatahiry faka an'ny mpizara anao.
4.- Mba hanovana ny atin'ny mpizara anao dia alao ireo rakitra izay heverinao fa ilaina amin'ny fampirimana / Var / www.
Fanamarihana: amin'ny maha-te hahafanta-javatra, mahaliana ny manamarika fa ny fomba voalaza ao amin'ny teboka 1 dia mamela ny fametrahana ireo karazana Ubuntu hafa: Kubuntu, Xubuntu, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fametrahana LAMP amin'ny Ubuntu: ny fomba mora
Piegope dia hoy izy:
Ity safidy ity dia mety amin'ny kinova alohan'ny 10.10. Ao amin'ny Ubuntu Maverick dia mila mametraka ny application tasksel ianao.
Valiny amin'i Piegope
hanidy dia hoy izy:
Toy izao no nametrahana azy tao amin'ny Buntus androany.
sudo apt-mahazo mametraka tasksel
sudo tasksel mametraka mpizara jiro
Valiny amin'ny Lock
@ lllz @ p @ dia hoy izy:
Tsy fantatrao hoe impiry aho no nanandrana nametraka LAMP ary tsy nisy valiny andrasana tamin'ny alàlan'ny console, ity no fomba tsara indrindra tsy isalasalana XD misaotra fa tazomiko izy io.
Valio amin'i @ lllz @ p @
Faly aho fa nanompo azy
Hafa no nanaovako azy, ampidino ny fonosana xampp, ary soraty tsotra izao ity baiko manaraka ity:
Amin'ity no hamongorana azy io amin'ny / opt. Ny fanatanterahana azy dia mila atao tsotra fotsiny
"Fanombohana Sudo / opt / lampp / lampp".
Manoro hevitra ny hihazona ny "sudo / opt / lampp / lampp security aho" hametraka ny teny miafina ho an'ny mysql, phpmyadmin, proFtp ary serivisy hafa miaraka aminy, satria tsy misy teny miafina natokana ho azy ireo.
MENA7 dia hoy izy:
Valiny amin'ny RED7
Cbgames Berety dia hoy izy:
Salama, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako mametraka mpizara IRC hiresahana amin'ny xchat
Valiny tamin'i Cbgames Berety
Hehe… Oad… niteraka izany! 😛
Lepro dia hoy izy:
Salama, ao amin'ny Ubuntu 10.10 (Maverick) dia mila mampiasa ity baiko manaraka ity ianao (tsy misy safidy Synaptic):
sudo apt-mahazo mametraka lamp-server ^
Valiny tamin'i Lepro
Misaotra anao!! Daty tsara !!!
Heveriko fa mahasoa ihany izany raha manana pejin-tranonkala isika, sa tsy izany?
Hey! Daty tsara !! Misaotra anao!!
Tsy mimari-droa fa tara. Ampidiriko mivantana avy ao amin'ny tranokala ofisialiny ihany koa, apachefriends.org/es/xampp.html.
Na izany na tsy izany, ny fitsapana ataoko hianarako PHP sy ny sisa fotsiny no ampiasako azy.
Josetovar dia hoy izy:
menio toy ny ataoko mba tsy hamonoana na hanesorana ireo asa nampidiriko…. ? Misy ao amin'ireo fonosana Marka isaky ny lahasa… ohatra, ajanony ny LAMP Server
Valiny tamin'i JoseTovar
Fernando Torres M. dia hoy izy:
tsy tena izy, raha te hanao database ianao, ohatra, azonao atao ny mamorona azy ary manipy ny fangatahana ... toy ny hoe mampiasa pgadmin ohatra ianao. Ary, raha ny fahalalako azy dia tsy manana tranokala eto aho. mahafaly
Valiny tamin'i Fernando Torres M.
Faly aho fa mora ny fametrahana ny jiro ary mora kokoa noho izany…. raha raisina an-tsaina fa ny fianarana mitantana izay rehetra tafiditra, dia somary sarotra (ho an'ny vao manomboka) = P… arahaba !!!!!
Marina koa izany ...
Orlandoenunez dia hoy izy:
Tiako kokoa ny mampiasa
"Sudo aptitude mametraka MySQL server-php5 apache2 php phpmyadmin"
Na mitady fotsiny ireo fonosana ireo amin'ny Synaptic dia mandehana.
Mamaly an'i Orlandoenunez
Angamba izy io fa tsy nanamarina tsara, saingy mieritreritra aho fa ny mimari-droa dia rakitra efa voaangona avy amina programa, toy ny windows .exe. Raha esoriko ny zotram-pifandraisana .tar an'ny XAMP dia misy lahatahiry misy rakitra ahafahako mahita ny kaody loharano, mety ho diso hevitra aho, tsy nijery ireo rakitra rehetra tao anaty fonosana koa aho.
Na izany na tsy izany, toa ny nolazaiko hoe, sambany aho mampiasa Xampp ary ataoko manao fanazaran-tena amin'ny PHP.
Izy io dia miasa satria i Apache dia mihazakazaka foana ary mihaino fangatahana. Ary koa MySQL sy ny sisa amin'ireo fampiharana. Ny zavatra novakianao dia script izay manatanteraka asa isan-karazany ao anatin'izany ny fanatanterahana ireo mimari-droa mifandraika amin'izany. Raha tsy misolelaka amin'ny alàlan'ny lahatahiry izy fa raha mitondra kaody loharano fotsiny dia tsy mandeha izany raha tsy manangona azy ianao dia tsy izany no izy. Heveriko fa eto dia afangaro ny atao hoe script (izay ampiasainy hanamorana ny fanombohana / fijanonan'ny bizina) miaraka amin'ny binary izay miafina ao amin'ny lahatahiry fonosana resahina.
Ankehitriny rehefa mieritreritra aho fa marina izany, raha tsy binariera izy ireo dia mila manangona azy ireo alohan'ny hampiasana azy :). Misaotra tamin'ny fanazavana.
Io dia ny sarin'ny LAMP napetraka etsy ambony dia ny nanoratany etsy ambany xD
Raha mbola mianatra azy ianao dia tsy manelingelina ahy ny manazava na manazava zavatra iray na in'arivony, na raha misy ny fifanakalozan-kevitra dia resaho izany, afaka mampianatra zavatra vaovao anao hatrany izy ireo = DY X3MBoy raha manazava ny antony ianao maninona ny fisorohana ny fampiasana XAMPP dia tiako ny mianatra azy.
Raha tsy binary izany dia hazavao amiko ny fomba fiasan'ny helo aminao. Ny fahatongavany ao anaty fonosana tar dia raharaha iray hafa izay tsy miankina amin'ny fampiasana binariera ivelany. Tsy tranokala ofisialy ihany koa io, satria ny singa tsirairay dia novolavolain'ny ekipa mahaleo tena isan-karazany. Araka ny nolazain'i X3MBoy, ity fonosana ity dia tsy asaina mamoaka azy io na koa misafidy, satria raha tadidiko tsara dia izy irery no nitahiry ireo config rehetra tao anaty fampirimana iray ihany. Xampp dia fonosana iray misy ny bundle "amp" efa voamboarina sy irery, izay ampiasaina indrindra ho an'ireo izay tsy te-handrindra ny mpizara fa mila mandeha fotsiny ary mandingana ny fametrahana azy. Tena tsara izany raha tsy ny seriver eo an-toerana fotsiny no tadiavinao haingana hamorona tranokala, na raha te hanonta endrika amboarina nataonao tamina PC tsy misy Internet ianao satria nesorinao ny olana fikirakirana iray manontolo, izay ahafahanao ao anaty lahatahiry rehetra ahafahanao ataovy ao anaty lakile USB izany, fa raha miala amin'izany ianao dia tsara kokoa ny mametraka sy manamboatra azy. Ny tena manokana dia tsy nanana olana tamin'ny Windows niaraka tamin'i Xampp aho, ka hahafinaritra kokoa ny mahafantatra ny antony sisa X3MBoy, noho izany dia mianatra bebe kokoa izahay ary misoroka ny fikororohana = D.
Ninboy dia hoy izy:
Ny P amin'ny "LAMP" dia midika hoe PHP, fa tsy Perl
Valiny tamin'i Ninboy
Jesosy marin dia hoy izy:
Ny P in LAMP dia midika hoe: PHP, Python, Perl satria ireo fiteny telo ireo dia manomboka amin'io taratasy io.
Valiny tamin'i Jesosy Marin
X3MBoy dia hoy izy:
Tsy mamporisika ny fampiasana xampp aho, noho ny antony maro, izay tsy hilazako afa-tsy iray ary izany dia tsy tsara kokoa ny mametraka fonosana mimari-droa ivelany noho ny fonosana mimari-droa avy amin'ny trano fivarotana ofisialy.
Mamaly an'i X3MBoy